अन्लाईन कक्षा के का लागि म’न्त्री ज्यु ? – एक नारायण पौडेल – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
अन्लाईन कक्षा के का लागि म’न्त्री ज्यु ? – एक नारायण पौडेल
सबै निजि विद्यालय , सामुदायिक विद्यालय , कलेज तथा बिश्वविद्यालय सम्पूर्ण बन्द गरिदिउँ। त्यसलाई साँसद fun park को रूपमा विकसित गरौ । प्राथमिक तथा माध्यमिक तहमा रहेका करिब ३५२२२ विद्यालय , १० बिश्वविद्यालय अन्तर्गतका करिब १४००० प्राज्ञिक कलेजहरुलाईलाई जनप्रतिनिधि आबासिय क्षेत्रमा बिकास गरौ । १ लाखको हाराहारीमा रहेका शिक्षक तथा शिक्षिकालाई अनिवार्य सरकारको सुरक्षा समिती अन्तर्गत राखौ ।
त्यस्तै गरि कलेजहरुका प्राध्यापकहरुलाई अनिवार्य सरकार बचाउ अभियान बौद्धिक समितीमा अनुबन्ध गरौ । यसो गर्दा न त शिक्षक तथा शिक्षिकाको गुनासो, आग्रह , धम्की , आन्दोलन , सिफारिस वा अन्य कुनै जोखिम उठाउनु पर्छ न त तलब दिने झन्झट नै हुन्छ।
प्रत्येक जिल्लामा एक जना अनलाइन शिक्षक जसले आन्दोलनमा योगदान गरेको होस जसको टाउको फोरिएको वा हातखुट्टा भाँचिएको होस वा आबश्यक परेको बेला २-४ सय मान्छेलाई बसमा कोचेर सदरमुकाम ल्याउन सक्ने तागत राखोस त्यस्तो प्रतिबद्ध कार्यकता नियुक्ति गरियोस् । बरु नाथे एक जना शिक्षकलाई दोब्बर तेब्बर तलब दिन सकिन्छ ।
यसो गर्दापनि एउटा जिल्लामा निजि / सामुदायिक विद्यालय +2सहित धेरैमा ४८ जना शिक्षक/ शिक्षिका भए पुग्छ । त्यस्तै निजि कलेज र बिश्व बिद्यालयमा फ्याकल्टी अनुसार तहगत एक जना प्राध्यापक नियुक्ति गर्दा पनि धेरैमा १०० जना प्राध्यापक भए पुग्ने देखियो । तसर्थ एक जिल्ला बराबर १४८ जनालाई अनलाइन शिक्षक/ शिक्षिका / प्राध्यापक नियुक्ति गरौ। यसो गर्दा ७७ जिल्लामा धेरैमा ११३९६ जनाले गुणस्तरीय र प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । फेरि निजि र सामुदायिक विद्यालय बिचको शैक्षिक गुणस्तरबिचको आकास पतालको भिन्नता पनि स्वत: खारेज हुन्छ ।
देशमा गणतन्त्र आएको १३ बर्षको छोटो अबधिमा प्रबिधि र बिकासले छलाङ्ग मारेको कुरा सर्बबिधित नै छ । जताततै सडक पहुँच , बिजुली बत्ति तथा ईन्टरनेटको सहज उपलब्धले जनताहरु खुसी छन। सबैको हात हातमा आईफोन ,सामसुङ, ल्याबटब र प्याड पुगेको छ। मानिसहरु एउटा कोठाबाट अर्को कोठाका परिवार वा साथीभाईहरुलाई समेत सस्तो ईन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै म्यासेन्जर , इमो , भाईबरबाट कुराकानी गर्छन ।
फेरि हाम्रा ईन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले उपलब्ध गराउनु भएको स्पिड र गुणस्तर यति राम्रो र भरपर्दाे छ कि आमन्नेसामन्ने बोलेको कुरा बरु नबुझिएला तर ईन्टरनेटको माध्यमबाट बोलेको कुरा आधा आधी बोल्दा नै के भन्न खोजेको हो भनेर पूरा आशय नै बुझिन्छ । ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटको गतिमा बिश्वको १४४ औ स्थानमा रहेका हामीले चमत्कारीक फड्को मार्दै पहिलो स्थानमा आईपुगेका छौ।
अझ स्थानीय प्रशासनले जनताको दैनिकीमा कुनै अप्ठ्यारो वा असहज नहोस भनेर बिजुली बत्ति बिना पनि उत्तिकै गुणस्तरीय ईन्टरनेट सेवा बिस्तार गरेको छ । त्यसले गर्दा कुलमान सर आएपनि गएपनि त्यसले कुनै असर पर्नेछैन । त्यो जाबो बिजुलीको हिरो हुने दिन गए अब । पहिला पहिला त्यो बिजुली आफुबिना ईन्टरनेट( वाईफाई) चल्दैन भनेर खुब फुर्ती लगाउथ्यो ।
खुबै हैकम चलाउन खोज्थ्यो । बरु हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधि , सांसद , मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा सालिनता र शिस्टता भेटिएला तर यो बिजुलीको चुरिफुरी कम्ता रिस उठ्दो थिएन ? मै हुँ भन्ने सोच्थ्यो बल्ल कुच्चिङ्ग खायो त्यसले ।
एक दशकको अबधिमा सरकारले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिदर र प्रगति देखेर विश्व दङ्ग छ । हरेक ब्यक्तिहरु आआफ्नो काममा ब्यस्त छन । कोहि जनता बेरोजगारी छैनन् ।जताततै पैसा नै पैसा छ तसर्थ कुनैपनि जनताका बिद्यालय तथा कलेज जाने उमेर समुहका छोराछोरीहरु मेलापात , ज्यालादारी , बनपाखा र खेतीकिसानी गर्नु पर्दैन ।
न त सडकमा पैसा मागेर वा प्लास्टिक बेचेर शुल्क नै तिर्नुपर्छ । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क उपलब्ध गराएकोले पढ्ने खर्चको जोहो गर्नको न त कुनै काम गर्नुपरेको छ न त कुनै जोखिम उठाउनु परेको छ । उमेर समुहका बालबालिकालाई अनलाइन कक्षा अध्यापन गराउन अभिभावक पनि सङ्गै बसेर हेरचाह गर्न कुनै समस्या हुदैन । ८३ % जनसंख्या गाउँमा बसोबास गर्ने भएपनि हाल आएर एकाएक जीवन शहरियामा रुपान्तरण भएसङ्गै उनीहरु फुर्सदिला बनेका छन । ।
१६ % जनता न्युनतम आहारा तथा खाद्यान्न समेत खान नपाउने अबस्था हटेर0% मा झरेको छ । बार्षिक प्रतिब्यक्ति आय १०८५ डलरबाट बढेर कतारलाई उछिन्दै पहिलो नम्बरमा उक्लिएको छ। तसर्थ कोरोनाको माहामारीको यहि मौकामा ताली, समर्थन र लर्खरिएको सत्तालाई समेत टेको दिनसक्ने अनलाइन कक्षा संचालन सम्बन्धि अर्को अध्यादेश आजै पास गरौ । मन्त्री परिषदमा आजै पेश गर्नुहोस । पास गर्ने रास्ट्रपति हुनुहुन्छ समर्थन गर्ने थाङ्ने जनता हामी छदैछौ ।
Previous नेपालको सरकार त घृ*णा गर्न पनि लायक भएन , प्रसंशाको त कुरै छोडौं , सम्झँदा पनि क*हाली लागेर आउँछ ।
Next ॐॐ आज – १९ बैशाख २०७७ शुक्रवार को रा’शिफल हेरी शेयर गरौं ॐॐ